Xubno katirsan Al-Shabaab oo lagu xukumay xabsi - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXubno katirsan Al-Shabaab oo lagu xukumay xabsi
Xubnaha katirsan Al-Shabaaab ee la xukumay. [Xigashada Sawirka: Sonna]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saddex xubnood oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu xukumay xabsi maanta oo Axad ah, sida uu sheegay guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Kowaad ee Ciidamadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Hal nin ayaa maxkamadu ku xukuntay xabsi daa’in halka labo kalena lagu xukumay 10 sanno oo xabsi ah, sida uu sheegay guddoomiyuhu.
Xubnaha la xukumay ayaa lagu helay dambiyo ay kamidyihiin sameynta qaraxyada iyo katirsanaanta Al-Shabaab, oo ah urur argagixiso.
January 6, 2018 Mareykanka oo liiska argagixisada adduunka ku daray hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab